Warbixinta shaqooyinka Mareykanka: Ka soo kabashada aan la filayn ee Madadaalada iyo Martigelinta
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Mareykanka » Warbixinta shaqooyinka Mareykanka: Ka soo kabashada aan la filayn ee Madadaalada iyo Martigelinta
Airlines • Airport • Wararka Ururada • Aviation • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • kirada baabuurka • saaciday inay • kariska • Entertainment • Wararka Dowladda • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • Shirka Warka Warshadaha • News • Dadka • Safarka Tareenka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Dalxiiska • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka • Wararka Mareykanka
Waxaa weli jirta baahi weyn oo loo qabo Koongarasku inuu bixiyo gargaar federaal ah oo dheeri ah iyo dhiirigelin si loo sii wado ganacsiyada ku-tiirsanaanta safarka illaa laga soo kabsado dhammaystiran ayaa la qaban doonaa-taas oo u baahan doonta soo noqoshada safarka ganacsiga iyo sidoo kale safarada caalamiga ah ee gudaha.
Warbixinta shaqooyinka niyad -jabka ah ee bisha Sebtembar waxaa soo saaray Xafiiska Tirakoobka Shaqaalaha Mareykanka.
Waaxda Madadaalada iyo Marti -gelinta Mareykanka ayaa aragtay shaqooyin aad u yar bishii Sebtembar.
Guulaha aan sinnayn ayaa inta badan loo aaneeyaa kala duwanaanshaha fayraska ee saameeyay safarka dhammaadka xagaaga.
Safarka Mareykanka soo saaray bayaankan soo socda maanta warbixintii shaqooyinka bishii Sebtember ee ay soo saartay Xafiiska Tirakoobka Shaqaalaha Mareykanka:
“Falanqaynta shaqaalaynta ee maanta waxay tilmaamaysaa soo kabasho aan sinnayn oo loogu talagalay waaxda Madadaalada iyo Soo -dhoweynta ee aadka muhiimka u ah, taas oo shaqooyin aad u yar lagu daray bishii Sebtembar (74,000 oo keliya) marka la barbar dhigo bilihii hore halkaasoo boqollaal kun oo shaqooyin laga soo kabsaday. Guulahan aan sinnayn ayaa inta badan loo aaneeyaa kala duwanaanshaha fayraska ee saameeyay safarka dhammaadka xagaaga.
"Waxaa jira baahi weyn oo loo qabo Koongarasku inuu bixiyo gargaar dheeri ah oo federaal ah iyo dhiirigelin si loo sii wado ganacsiyada ku-tiirsanaanta safarka illaa laga soo kabsado dhammaystirku wuu qabanayaa-taas oo u baahan doonta soo noqoshada safarka ganacsiga iyo sidoo kale safarada gudaha ee caalamiga ah."
Sida laga soo xigtay warbixinta shaqooyinka Sebtember, dhaqaalaha Mareykanka wuxuu shaqooyin ku abuuray si aad uga gaabis badan intii la filayay bishii Sebtember, oo ah calaamad rajo-xumo leh oo ku saabsan xaaladda dhaqaalaha in kasta oo wadarta guud si weyn dib loogu dhigay hoos-u-dhac weyn oo ku yimid shaqaalaynta dawladda.
Mushaaraadka aan xirmooyinka ahayn ayaa kor u kacay 194,000 bishii, marka la barbar dhigo qiyaasta Dow Jones ee 500,000, the Waaxda Shaqaalaha la sheegay.
Inkastoo wadarta shaqooyinka daciifka ah, mushaharka ayaa aad u kordhay. Faa'iidada billaha ah ee 0.6% ayaa riixday kor-u-kaca sannadka ilaa 4.6% maaddaama shirkaduhu adeegsadaan mushahar kordhin si ay ula dagaallamaan yaraanta shaqaalaha ee joogtada ah. Shaqaalaha la heli karo ayaa hoos u dhacay 183,000 bishii Sebtember waxayna 3.1 milyan ka xishoonayaan meeshii ay ahayd Febraayo 2020, wax yar ka hor inta aan lagu dhawaaqin masiibada.
Warbixintu waxay ku soo beegmaysaa waqti xasaasi u ah dhaqaalaha, iyada oo xogtii u dambaysay ay muujineyso kharashaadka macaamiisha ee adag inkasta oo sicirku kor u kacay, kororka qaybta wax -soo -saarka iyo adeegyada, iyo kor u kaca kharashaadka guryaha.